Ahoana no hanombohana fivarotana amin'ny Amazon amin'ny zavatra tena hita?
Ny fikarakarana ireo vokatra tsara mba hivarotra am-pahombiazana azy ireo amin'ny Amazon amin'ny ankamaroan'ny zavatra notadiavina dia tena zava-dehibe ny fahombiazan'ny fandraharahana eo amin'io tsena feno olona io. Raha ny marina, tsy misy mpitaingina fa ny safidy tsara indrindra dia mamaritra ny zava-drehetra momba ny fahombiazan'ny orinasa alohan'ny zavatra hafa rehetra. Andao hiatrika izany - na dia tsara tanteraka aza ny manatsara sy manatsara ny lisitry ny vokatrao amin'ny Amazon. Raha naka ny vokatra diso izay tsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny tombony iray ianao, dia tsy ho azo atao ny manolotra ireo tolotra hita ao Amazona amin'ny ankamaroan'ny mpivarotra amidy amin'ireo mpivarotra an'arivony isan'andro. Izany no antony maha-manan-danja ny mahatakatra azy - tsy tokony hisalasala ny hampiasa vola fotoana sy ezaka amin'ny fitadiavana ny vokatra mety hividianana zavatra tsara sy hivarotra tsy tapaka - machinery appraisals. Noho izany, inona no mahatonga vokatra mahasoa? Eto ambany eto dia hampiseho anao lisitry ny soso-kevitra sy soso-kevitra vetivety ho anao aho mba hahitana vokatra tsara azo antoka.
Farany amin'ny vokatra (amin'ny salan'isa)
Voalohany indrindra, tokony horaisinao ho azy io - ny vidin'ny sanda eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 50 dolara toerana mahatsikaiky amin'ny Amazon, fa ny ankamaroan'ny doka hita matetika dia maka any. Nahoana? Satria milaza ny mpividy, ny olona dia mety mandray fanapahan-kevitra tsotsotra indraindray rehefa mahita ny sarany vidiny amin'ny ankapobeny indrindra ao anatin'izany sehatra izany. Antony iray hafa anananao ny manenjika azy ireo fa ny zavatra tsy dia lafo loatra dia angamba ireo tsotra, raha tsy manana azy ireo, sa tsy izany? Raha ny marina, ny fisafidianana ity sakana barika ambany ity dia ny fanapahan-kevitra tsara entina hanombohana miditra an-tsena.
Nentina tamin'ny safidy malalaka kokoa, ny fisafidianana vokatra mahasoa iray dia zavatra tena manan-danja mba hijerena ny soso-kevitrao amin'ny Amazon amin'ny ankamaroan'ny zavatra notadiavina. Raha ny amiko, mino aho fa ny lanjany tena tsara indrindra amin'ny vokatra tena mendrika dia tokony hijanona eo amin'ny 1,5 ka hatramin'ny 2,5 kilao. Izany dia mazava ho azy fa mamaritra ny haben'ny fivarotana maimaim-poana amin'ny vidiny lafo vidy.
Ny vokatra dia ao anatin'ny sokajy mitovy
Ny zavatra dia matetika dia asa tsy azo fehezina ny mahazo tombanana marina momba ny vokatra BSR ), mazava ho azy talohan'ny nanombohanao nivarotra izany. Fa izay azonao atao dia ny manamarina fa ny vokatrao vaovao dia manana vintana anton-javatra azo hamidy tsara. Noho izany, manoro hevitra aho fa manana fanamarinana indroa amin'ny vokatra mitovy sokajy sy ny isan'ireo BSR. Raha ny amiko, dia handray ny laharana 5.000 BSR aho ho toy ny tokonam-baravarana mba hanamarinana ireo zavatra hita ao Amazon amin'ny sokajy lehibe indrindra, na ireo vokatra mitovy amin'izany ihany koa. Mora fotsiny ny manazava ny zava-mitranga - ny fiheverako manokana vao haingana no nampivoarako tamin'ny alalan'ny fampiharana mivarotra ny ecommerce. Na izany na tsy izany, araka ny asehon'ny fotoana, ny soso-kevitra dia miasa.